malyuun oo kuu sharaxey qaabka loo salsalaaxo gabdhaha | shumis.net
Home » galmada » malyuun oo kuu sharaxey qaabka loo salsalaaxo gabdhaha
malyuun oo kuu sharaxey qaabka loo salsalaaxo gabdhaha
Hadaba Waxa laga yaabaa in rag badani kolka ay biya bbaxaan, u qaataan in hawshii galmadu ay dhammaatay, dabeetana intay dhinaca kale u jeestaan khuuro billaabaan, iyaga oon dheg jalaq u siin dhibaatooyinka uu falkoodaasi u geysanayo haweeneyda.
Ugu danbeeyntii dhallinyarada qaar baa isku daya inay biyabbaxa kadib geedka kusii hayaan haweenkooda oo aanay kala bixin, billaabana istiimin si ay mar kale uga tuurtaan. Qaar kale kolka ay kala baxaan bay misna daqiiqado kadib istiimin iyo dhuuqmo billaabaan si ay u gaaraan isla hadafkaasi. Haddaba caafimaadku waxa uu ku jiraa,
diinteenna Islaamkuna qabtaa in galmada hore kedib geedka ninka biyo kulul lagu mayro, welibana hadday suurtagal tahay la qubaysto ama ugu yaraan la weyseysto, si firfircoonaan iyo looga helo dardar hor leh, markaa kadibna haddii la isku afgarto garoonka la iskula laabto. Waase in biyabbaxa labaadna lagu soo af-jaraa isla gunaanadkii aynu soo sheegnay.
Title: malyuun oo kuu sharaxey qaabka loo salsalaaxo gabdhaha